afa-mandositra Lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Raha Manaova fanatanjahan-tena tsy tapaka milalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Mandosira, dia mety ho mahasoa ho anareo eto amin'ity fiainana ity. Aoka hatao hoe efa voafandrika ary tsy maintsy hahita ny lalan-kivoahana. Mety ho tsotra trano, fa ny varavarankely dia nandray ny, na ny hahavony, ary ny varavarana tsy manana fanalahidy. Hijery ny toerana sy ianao Tsy maintsy hahita zavatra mahasoa na Soso-kevitra izay lalana hifindra. Ny soratra teo amin'ny rindrina, na sary dia hanome hevitra, ary hanampy mba hanokatra ny hidin-trano Pin amin'ny fitsipihana na sombin mba hanosika ny fanalahidin'ny avy amin'ny lavaka eo amin'ny lafiny iray koa amin'ny trano mimanda.
Adama sy Eva: Sleepwalker
Teny miafina efitrano fandosirana
Drafitra fandosirana ny fonja
Fialofana any amin'ny tempoly
Taratasy any amin'ny tempoly
Ny lalao dia Lava
Mitsoaka gana gana
Mandositra House House
Fialana amin'ny trano fandraisam-bahiny
Mandosira avy any amin'ny tanànan'ny tendrombohitra
Fandosirana ny fonja
Mampatahotra Basement Escape Episode 1
Mpamosavy Wolf Escape
Andramo ho afa-mandositra
Stailman Jail Break Mission
Mpandositra tovovavy natahotra
Mandosira zazalahy Irate
Ny fandosirana zazavavy karantina
Famonoana Ratsy Norvezy
Fialana an-tanety mandositra
Vonjeo ny liona
Mandosira Progeny Robber Escape
Saribato mandositra ny sarety
Mandositra ilay zazalahy milamina
Mandositra ny ala alahelo
Lalao Escape tamin'ny Category:
Mialà ao amin'ny efitrano
Farany afa-mandositra Lalao
Kitapo Lalao Squid Lalao
Fandosirana ny efitrano ho an'ny ankizy 57
Easy Room Escape 44
Fialana amin'ny trano fialofana
Mandosira ny trano Luna Kitty
Fialana amin'ny tany mampatahotra
Mandosira an-jaridaina miloko
Mandosira Cockatoo Manga
Fialana trano Oiseau
Fialana amin'ny tany lavender
Lalao riddle colony afa-mandositra
Lalao Online Rehetra afa-mandositra Lalao
Mitady fanandramana vaovao? Play ny lalao Escape
Games Mandosira Lalao mitovy ny fitadiavana, satria ny tena asa – afa-mandositra, dia ilaina ny scour ny paritra mba hitady zavatra mahasoa hampiasa azy ireo amin'ny toerana sasany, ary mihazakazaka rafitra iray hafa amin'ny alalan'ny fanokafana ny fidirana amin'ny dingana vaovao. Ireo kilalao mahafinaritra Fifaliana ombieny ombieny, na oviana na oviana izy ireo tany am-boalohany misy tia vazivazy, ary ny gameplay dia samihafa, tsotra ary mitaky vaovao teknolojia nomerika. &Nbsp;
mpankafy an'i io foana karazana handray ny ampahany amin 'mahafinaritra, satria ny vokatra amin'ny lohahevitra isan-karazany efa nivarotra ampy isan-kariva manomboka amin'ny piozila vaovao. Ao amin'ny toetry ny olombelona rehetra dia misy ny nisongadina, noho ny izay, amin'ny tombony ho tari-dalana manokana tany io kosa Eleazara.
Ao amin'ny lalao tsirairay traikefa nahafinaritra vaovao Mandosira
miaraka Masyanya mety hahafinaritra ny mihomehy amin'ny Adventures azy sy ny namany. Io tovovavy mirenty izahay noho ny sahisahy natiora mahazo tsy tapaka ao amin'ny toe-javatra sarotra, ny Output izay sarotra ny mahita. Fa ny quirky miasa saina toy ny counterweight, ary hahita ny fomba hivoaka. &Nbsp;
haingana sy mpankafy mba handeha amin'ny hoe manana traikefa nahafinaritra-nanana lohahevitra lalao. Aoka hatao hoe ny Neny nalevina tao an-tranony ho arivo taona lasa izay, dia nifoha tampoka. Araka ny efa fantatrareo, ny piramida be ao anatin'ny Misafotofoto, miafina efitra, sy ny fandrika. Nanapa-kevitra ny haka avy ao aminy, dia tsy maintsy mandresy ny Neny Nikasa ny zava-drehetra tamin'ny fotoana ny mpanao mari-trano, mba hahita ny masoandro indray. Mifindra ao anatin'ny trano maizina, mitady na inona na inona izay afaka hanampy mba hivoaka ka mitsambikina ny sakana, ary mitandrema ny fandrika.
Afaka mora foana ho vavolombelona fihadian-tany tany Ejipta. Tena mahaliana izany hianatra momba fahiny kolontsaina, ny fahalalana sy ny fomban-drazana. Fa ratsy vintana, ianareo very tao amin'ireo sisa tavela ary tsy afaka mahita ny lalana ho any an-toby. Rano ianao, mazava ho azy, tsy misy, tsy drafitra lava mandeha. Ny masoandro bakes indrafo sy kely kokoa, ary mahavita eny ny hafanana. Na izany aza, misy fanantenana kely ny hamandoana sarobidy handray avy amin'ny milina taloha, saingy tapaka. Fa ny manamboatra azy io, tsy maintsy mitady ny tsy hita faritra, ary mahatakatra ny fomba mihazakazaka rafitra manan-tsaina lasa taonjato maro lasa izay. &Nbsp;
Pirates ny mpanjono tsotra indraindray voasazy araka ny namany izay nambolena amin'ny nosy an-tany foana. Velona irery sy tsy misy loharanon-karena no tena sarotra sy ny olona vao maty. Fa tsarovy Robinson Crusoé, izay nandany taona maro nosy ity. Ary noho izany, satria lavitra sivilizasiona, dia mila tsy ho tafavoaka velona amin'ny fomba rehetra, fa mba hitady fomba hahazoana izany foana amoron-dranomasina. Fa na dia tsy afaka mahita izany ny mieritreritra fa, raha kely indrindra, ianao eny an-kianja. &Nbsp;
Hianao dia amin'ny fahavalo vahiny planeta. Ary nisy irery nosy paradisa ary ho hitanao ny mahafinaritra nofy. Horonan-taratasy ianao meteorites, vahiny hita Niriny ka hanafika ny fiara blasters. Ahoana no mba hofafako hiala amin'ity tany ity?
tantara Museums – Masiaka iray hafa toerana. Natao izy ireo mba hiverina antsika ny fahatsiarovana ny lasa. Ireto ny asa tanana sy ny mummies voatahiry indray mandeha mijoalajoala loham-pireneny, Mpanjaka, farao. Angamba izany no mahatonga ireo foana tranombakoka feno zava-miafina sy ny hafa momba ny matoatoa, mirenireny ny lalantsara amin'ny alina. Raha vao ianao amin'ny iray tamin'izy ireo, ary nisy zavatra tena tsy mampino – Nifindra ara-potoana ianao, ary niafara tao amin'ny Moyen Âge. Raha ianao babo, ary novonoina toy ny mpitsikilo, dia tsara kokoa ny manomboka mitady ho amin'ny fivoahana.
Lalao afa-mandositra an'ilay trano ny mampalahelo amin'ny Halloween – lohahevitra iraisana. Ao amin'ny trano sasany na dia mandritra ny andro mba handeha mafy, ary amin'ny alina, ary na dia rehefa voahodidina biby goavam-be & hellip; Miezaha mba hiala toe-javatra io unscathed.